Iindaba -Ukuqinisekiswa kokutya
NgoJulayi 28, 2020, isebe elifanelekileyo leShandong Provincial Food and Drug Administration lagunyazisa iqumrhu lesithathu lovavanyo, i-SGS, ukuba iphinde yavavanya inkqubo yolawulo lomgangatho weLimeng, esekwe kwinkqubo yolawulo lwe-HACCP yamazwe aphesheya. Iiprojekthi zezongezelelo zokutya, umgubo wobisi kunye neelekese gummy ziye zaqwalaselwa.
Kwiintsuku ezimbini, iingcali zeqela lesithathu bezigqibile ukuphononongwa okubanzi kwenkqubo yethu yolawulo lomgangatho. Umxholo wovavanyo ubandakanya indawo yezixhobo kunye namaxwebhu esoftware. Iingcali ngaphambi kokujonga izinto ezingavunyelwanga, elebhu, iindibano zocweyo, izixhobo zemveliso, izixhobo zemveliso, kunye nezixhobo zokufumanisa.
Kwicandelo lesoftware, iingcali zivavanye amaxwebhu efayile, kwaye ngokweemfuno ze-HACCP, iingcali zichaza iimeko ezimbalwa, esekwe kwinkqubo ye-HACPP kwindawo yolawulo kunye namanye amanqaku. Enye, iirekhodi zoqeqesho, ulawulo lwempilo kunye neefayile zokugcina ziye zajongwa.
Amava okuphuma kweentsuku ezimbini, iingcali ze-SGS zamkele imisebenzi yethu kwimveliso nakulawulo, kwaye zinethemba lokuba siza kuseta amabango aphezulu kwinkqubo yemveliso nolawulo, esekwe kwi-HACCP.
Ngokweziphumo zokuphononongwa, inkampani yethu iququzelele abaphathi abaphezulu kunye nabasebenzi ngokulungisa ukungathobeli, kunye nokuqinisekisa inkqubo ye-HACCP kwimveliso. Wonke umntu unoxanduva lokuqinisekisa iimveliso zethu zisempilweni kwaye zamkelwe ziimarike kunye nabathengi. Kwinkqubo yophuhliso lweLimeng pharm, sihlala sigcina sisebenzisana nemibutho yovavanyo eyaziwayo yamanye amazwe, njenge-SGS, i-BSI UK, i-TUV kunye neminye imibutho ukuze inkqubo yethu yemveliso isebenze ngokuchanekileyo kwaye iqinisekise ukuba iimveliso zethu zamkelwe yi-oversea .